UKWAKHA service - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Precision UKWAKHA Izikhungo-China eshibhile UKWAKHA Izingxenye Umkhiqizi
Ngenxa enhle kakhulu ukuphela machining imboni, OuZhan has a lot of izinsiza forging abakhiqizi ngezinga eliphezulu nokubambisana. Ingxenye ehlanganisiwe ivame ukudinga ukushisa okuphezulu ukwakha okungenalutho, bese ekugcineni ithunyelwa embonini yethu yemishini ukuze icubungulwe okokugcina. Ngakho-ke, njengomkhiqizi onamandla onesipiliyoni seminyaka embonini yokucubungula ngomshini, asijwayelene nezinqubo ezahlukahlukene zokuqedela, kepha futhi sinokuqonda okuhle kwezixhumanisi ezahlukahlukene zokukhiqiza nezinqubo zobuchwepheshe zamafektri ethu asezansi, okungukuthi , umakhi wezingxenye zokwakha.
Ngakho-ke uma udinga izinsizakalo zokwakha, ungabheka ngqo ifektri yokwakha, kepha ukukhetha okungcono ukuthola ifektri yokulungisa imishini. Udinga ukuthumela imidwebo yomkhiqizo wakho kubo kuphela, futhi bazokusiza ekutholeni amafektri okwakha ikhwalithi, basebenzise iminyaka yabo yesipiliyoni ukukuhlelela zonke izinqubo zokucubungula nezinqubo zakho. Konke okudingeka ukwenze ukulinda ukulethwa komkhiqizo osuqediwe, esikhundleni sokufuna ifektri yokwakha bese kuba yimishini yokwenza izinto, ezokusindisa isikhathi esiningi namandla.
Amandla nezici ze-Ouzhan Precision Forging
Noma ngabe yiziphi izimo, njalo ukwenza ikhwalithi ephezulu kakhulu futhi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo okuyekethisa ikhwalithi yethu kuyisakhi sendawo esibaluleke kunazo zonke e-Ouzhan.
• Ukwakhiwa kabusha kwensiza.Njengoba amakhasimende ethu engajwayelene kakhulu nokukhohlwa, lapho sithola imidwebo yabo yokuklama, sithole ukuthi ukwakheka akunakwenzeka ukukhohlwa, futhi iqembu lethu lobunjiniyela lizozakha kabusha izingxenye ngobuchwepheshe bethu bokwenza. Esinye isimo esifanelekile ukuthi amakhasimende awakwazi ukusebenzisa i-CAD ukudweba imikhiqizo, kepha ayiprinte ngesandla, ngaphandle kokubekezelelana, ubukhulu obuthile kuphela. Kulokhu, sizophinde sinikeze imidwebo yobuchwepheshe yobuchwepheshe enezimpawu zokubekezelela ezijwayelekile.
Ukuthuthukiswa kwesikhunta.Ikhwalithi ephezulu yokwakha isikhunta yisisekelo sokukhiqiza izinga eliphakeme lokufaka izingxenye.Onye yezinzuzo zethu ezisobala ukuthi sinethuluzi lethu futhi sife esitolo futhi konke okufayo okufakwayo kwaklanywa futhi kwenziwa yithi uqobo.
• Ukuvalwa kokuvalwa okuvaliwe. Inqubo ekwakheni inkampani yethu umlingani ivaliwe-die UKWAKHA, ngakho-ke sizibophezele ekukhiqizeni forgings ezincane zensimbi kanye aluminium forgings. Sisebenzisa imishini yokwakha kusuka kumathani angama-300 kuye kumathani ayi-2500, singanikeza ukukhohlwa okungu-0.2kg-50kg.
• Precision kokuqedela.Ngezinye izikhathi, ukukhohlwa akukwazi ukufinyelela ubukhulu bokugcina noma ukubekezelelana kwengxenye yokugcina. Kulokhu, sizogodla okunye ukubekezelelana lapho sakha, bese senza imishini ngokunemba. Ukusebenza okunjalo kokuhlinzeka kuzonikeza amakhasimende ethu izingxenye eziqonde kakhulu.
• Ukwelashwa ngokushisa nangaphezulu. Ukuze uthuthukise izakhiwo zomkhiqizo, njengobulukhuni, ukwelashwa kokushisa kuzokwenziwa ngemuva kokukhwabanisa. Inkampani yethu ingahlinzeka nganoma iyiphi insizakalo yokwelapha ukushisa uma iceliwe.Singahlinzeka nangezinsizakalo ezahlukahlukene zokwelashwa kwendawo, njengokupenda, ukufaka i-galvanizing, njll.
• Ukuhlolwa okungonakalisi. Ngokuthethelelwa ngakunye, sizoqhuba ukuhlolwa okungonakalisi ngaphambi kokulethwa ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
• Insizakalo yokupakisha yangokwezifiso. Singanikeza noma yiziphi izinsizakalo zokupakisha ezenziwe ngezifiso, kudingeka nje usinikeze imininingwane yokupakisha edingekayo.
Kungani Khetha Ouzhan UKWAKHA Services
1. Iminyaka yesipiliyoni semishini
U-Ouzhan ubelokhu ekhethekile ku-CNC machining amashumi eminyaka, sisesimweni esihle sokubambisana nesitshalo sokwakha futhi sijwayelene nezinqubo ezahlukahlukene nezinqubo ekwakheni.
Ouzhan ngokukhethekile turning, Milling, lathing, imishini, CNC amasevisi milling, ukuze ukwazi ukuthola Ukukhetha enkulu ngokunemba machining services for izingxenye zakho UKWAKHA kusuka ithimba lethu omethembayo.
Sinabanjiniyela abayi-10 esikhungweni sethu se-R & D, bonke bangodokotela noma oprofesa base-University of Science and Technology of China. Singahlinzeka ngomsebenzi wobungcweti nobuchwepheshe kakhulu.
Sinezisebenzi zokuhlola ikhwalithi yobuchwepheshe nezinsizakusebenza, ngokuya ngamazinga wamazwe omhlaba kwimikhiqizo yakho ukuze uvivinye, bese ukhipha umbiko wokuhlolwa oningiliziwe wezingxenye zokwenziwa kwamakhasimende.
Osayizi ngezifiso kanye bobunjwa ayatholakala. Uyemukelwa ukwabelana ngemidwebo yakho ye-2D noma ye-3D yezingxenye zakho zokwakha nathi, ake sisebenzisane ukwenza impilo ibe nobuciko ngokwengeziwe.
Iyini Insizakalo Yokwakha Nendlela Esebenza Ngayo
Enqubeni yokwakha, insimbi yakhiwa ngokucindezela, ukushaya, noma ukukhipha ngaphansi kwengcindezi ephezulu kakhulu ukwakha izingxenye ezibizwa nge-forgings. Cishe noma iyiphi insimbi ingafakwa, kufaka phakathi i-carbon, ama-alloys kanye nensimbi engagqwali, i-aluminium, i-titanium, ithusi, ithusi, njll. Insimbi ifudunyezwa ngaphambi kwenqubo yesevisi, kodwa ayincibiliki njengasenqubeni yokusakaza. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezinqubo zokufaka, kufaka phakathi ukubanda okubandayo noma ukukhanda kwekhanda, ukufa (okuvaliwe okufayo) kokufaka, ukuvula okokuvula okuvulekile nokugoqa kwendandatho yokugoqa. Uhlobo lwensizakalo yokwakha ekhethiwe incike ensimbi ezokwakhiwa kanye nokuma, usayizi nezinto ezibonakalayo zomkhiqizo wokugcina.
Ekwakheni okubandayo, insimbi esetshenzisiwe ayishisi ngqo. Esikhundleni salokho, yenziwa ngaphansi kwengcindezi ephezulu kakhulu. Le nqubo yenza usayizi womkhiqizo unembe ekubunjweni kokugcina. Kuvame ukusetshenziselwa ukudala izingxenye ezincane ezifana nezibopho. Yize amandla adingekayo ekubunjweni kwensimbi emakhulu kakhulu, njengoba kungadingeki ukushisa, amandla aphelele adingekayo okwakha izinto esebenzisa le nqubo mancane. Izindatshana ezilungiselelwe ngale ndlela ngokuvamile ziqinile ngoba ukufudumeza akuwenzi buthaka amandla nokuvumelana kwensimbi.
Impression die ekwakheni isevisi esetshenziswa kakhulu yokwakha. Ekuhlanganiseni kokufa, kufakwa insimbi yomsebenzi phakathi kwababili abafayo. Njengoba isikhunta sisondela, into yokusebenza izobhekana nokuguqulwa kwepulasitiki kuze kube yilapho uhlangothi lwayo olukhulisiwe luthinta udonga lwecala lwesikhunta. Kule nqubo, ngoba enye insimbi encibilikisiwe evela ku-workpiece igelezela ngaphandle kwe-induction yesikhunta, i-flash yakhiwa. Lapho i-flash ipholile, inika umsebenzi wokumelana nomsebenzi ku-deformation, ngaleyo ndlela kuthuthukise amandla omkhiqizo wokugcina. Lokhu kudala ingcindezi ngaphakathi kwezingxenye eziningi futhi kusiza ukugeleza kwento kungene ngaphakathi kokungagcwaliswanga.
Ekuvulekeni kokuvulwa okuvulekile, i-die ayimbozi ngokuphelele umsebenzi. Esikhundleni salokho, kunezikhala ezithile ezivulekile ezivumela zonke izici zomsebenzi ukuthi zisuke ekuxhumaneni ngqo kwesikhunta esishisayo ziye ezindaweni ezipholile ezivulekile. Ngesikhathi sokuvulwa kokuvulwa kwensimbi, into yokusebenza yensimbi iyafudunyezwa ngaphezu kokushisa kwayo kokufakwa kabusha, bese inqubo yemishini iqala. Kuyo yonke le nqubo, into yokusebenza iyasuswa ukuze zonke izici zokwenza umsebenzi zikwazi ukwenziwa. Njengoba i-workpiece ihamba futhi ibekwa kabusha, izingxenye ezisendaweni evulekile zizophola ngaphansi kwephoyinti lokuphinda kufakwe insimbi, bese ziphinde zivuselele njengoba ukuqhubeka kokufaka.
Ukugoqa indandatho kuhilela ukufudumeza i-billet yensimbi ekushiseni okwenziwe. I-preform ibese ifakwa esigayweni sokugaya sangaphakathi. Lapho ingcindezi isetshenziswa ezindongeni ze-calender, i-preform iqala ukuthatha ukwakheka okuyindilinga noma okuyindilinga. Njengoba ubukhulu bangaphakathi nobangaphandle bukhula kulezi zinsizakalo zokwakha, indawo enqamulelayo iyancipha.
UKWAKHA Izinto - Izinto ezisetshenziselwa UKWAKHA
Izinto ezi-Brittle azikufanele ukwakhiwa. Izinto ezino-plasticity omuhle kanye nendawo enamapulasitiki enkudlwana zifaneleka kakhulu ekwakheni, njenge-carbon steel, i-alloy steel, nezinye izinsimbi ezingezona i-ayoni njengethusi, i-aluminium ne-magnesium alloys.
Ouzhan UKWAKHA Surface Qeda